I-Wee Haven-Indawo yokuphumla, ukubonakalisa, ukuphumla
Gorthleck, Scotland, United Kingdom
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguGill
· igumbi lokuhlambela labucala eliyi-1
Ibekwe nje iikhilomitha ezi-2 ukusuka eLoch Ness kwicala elizolileyo elisemazantsi, i-Wee Haven yindawo yokulala ene-ensuite enegumbi lokuhlambela kunye nokufikelela kwayo ngasese. Ineembono ezimangalisayo ze-Highland kwindawo evulekileyo yasemaphandleni kunye namahlathi ukuya ezintabeni ezingaphaya. Kukho igadi yendalo ebanzi enedama elikhulu elitsala iintlobo ngeentlobo zezilwanyana zasendle. Ikwindawo entle yokuhlola indawo yendawo kwaye yonwabele ukuhamba kwehlathi okanye iinduli le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kunye nokunxibelelana nendalo.
Indawo yokuhlala isandula ukuguqulwa kwaye inebhedi enkulu kunye nendawo yokuhlala kunye nokutya isidlo sakusasa ngelixa usonwabele umbono omangalisayo. Kukho ifriji encinci, i-toaster kunye neti kunye nezixhobo zokwenza ikofu kwigumbi. Oku kutya kulandelayo uya kushiyelwa ukuba uzenzele isidlo sakusasa:- Museli, Granola, Cereals, Yogati, isonka, ijusi yeorenji, ijam kunye nemarmalade.
Kukho indawo yokuhombisa ngokukhawuleza ngaphandle apho ungahlala khona ngeentsuku ezinelanga.
Iibhatyi ezimanzi kunye neebhutsi ezingcolileyo zingaxhonywa kwi-carport ukuze zome.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini le-en-suite liyafumaneka ngamanye amaxesha kwindlu enkulu. Nceda uqhagamshelane nomninimzi ngeenkcukacha ezithe vetshe.
4.95 out of 5 stars from 147 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-147
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi147
Ibekwe kumgama nje weekhilomitha ezimbalwa ukusuka elunxwemeni lweLoch Ness kunye neeFalls zeFoyers, kuninzi okunokuphononongwa kwaye kukho ukuhamba okungenamkhawulo ukusuka emnyango. Oonomatse obomvu, ipine martin, iintlobo ngeentlobo zeentaka kunye namaxhama abonwa rhoqo kwindawo ebizwa ngokuba 'yiSithili seLake' yaseScotland ngenxa yokuba zininzi iiLochs kule ndawo yeHighlands. Le yindawo entle kakhulu kumthandi wangaphandle. Kukho amagumbi eTea kunye nekhefi kwilali yaseFoyers, zombini zibonelela ngokutya okugqwesileyo, kunye nee-pubs ezimbalwa ezikufutshane apho unokutyela khona ngokuhlwa. IFoyers nayo ineofisi yeposi kunye neevenkile.
Umbuki zindwendwe ngu- Gill
Ujoyine nge- 2019 Februwari
Ukufikelela kuya kuba ngephedi yesitshixo, indawo yokuhlala ayinakho ukufikelela kuyo yonke indlu. Umnini uya kuba kwisiza ixesha elininzi ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo kwaye akuncede ufumane le ndawo yobuhle bendalo obubalaseleyo.
Ukufikelela kuya kuba ngephedi yesitshixo, indawo yokuhlala ayinakho ukufikelela kuyo yonke indlu. Umnini uya kuba kwisiza ixesha elininzi ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba un…
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 16:00 - 22:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gorthleck